जहाँ खाद्य मा युरोप लागि भएको सर्वश्रेष्ठ शहर | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > जहाँ खाद्य मा युरोप लागि भएको सर्वश्रेष्ठ शहर
खाना यति छ महिमित, विशेष गरी स्वादिष्ट खाना. यो युरोप बस्ने तपाईं यसलाई लागि धेरै कारण दिन्छ जब यो संग Obsessed हुन त सजिलो छ! खाद्य लागि सबै भन्दा राम्रो शहर युरोप मा हो, हामीलाई विश्वास हामी खाद्य साथै छन्, र यति तपाईं यस ब्लग संग मार्फत हुनुहुन्छ हुनेछ जब! बस, ध्यान दिएर पढ्न.
यहाँ रेल द्वारा पुग्न सक्ने युरोप मा खाद्य लागि सबै भन्दा राम्रो शहर को एक चयन छ:
सबैलाई अब यसलाई थाह - तपाईं प्रेम पर्नु गर्न युरोप जाँदैछन् भने, तपाईं फ्रान्स जाँदै. सानो तपाईं आफ्नो इंटरनेट एक्सेस संग प्रेम पर्नु फ्रान्स जाँदै छन् यद्यपि थाहा थिएन, साथै! खाना यसको प्रेम र यसलाई तयार लागि प्रसिद्ध एक देशमा, यो भोजमा मनपर्ने स्थान छनोट गर्न कठिन छ. कुनै गल्ती बनाउन, हुनत – लियोन अन्वेषण गर्न फ्रान्स शीर्ष foodie ठाउँहरू मध्ये एक छ! हाम्रो सिफारिस: ताजा हरियो cornichon अचार संग सेवा कटा salami rosettes र फ्रेन्च फ्राइज. लियोन संग जोडिएको छ रेल द्वारा स्विट्जरल्याण्ड त्यसैले तपाईं सधैं यस भन्दा पप "गर्न सक्नुहुन्छचकलेट देश"एक मिठाई भोजन समाप्त लागि.
लिओन यसको चकलेट Delights र थप युरोप मा खाद्य लागि सर्वश्रेष्ठ शहर हाम्रो रैंक भित्र हुन्छ.
ब्रसेल्सदेखि लियोन हाईस्पिड ट्रेन
भियना को गूंज शहर तपाईं सबै भन्दा राम्रो चकलेट लागि जाँदैछन् कहाँ छ युरोप मा केक - Sachertorte. स्वाद मा धनी, गाढा र गहिरो, यस कारणले, हाम्रो केक विशेषज्ञ अस्ट्रिया युरोप मा खाद्य लागि सर्वश्रेष्ठ शहर को हुन सम्मानित. त्यसैले जहाँ एक पाउन? भियना गरेको कफी घरहरू कुनै पनि! यो देशको हस्ताक्षर केक छ, र को स्थानीय यो यति छ निश्चित थाहा.
नोट: शहर को केही फोटो र आफ्नो खाना स्न्याप त्यहाँ गर्दा – तिमीले चाहन्छौ तपाईँको इन्स्टाग्राम चम्कने बनाउन, छैन फेरि के?
जब तपाईं सहरमा सबै भन्दा राम्रो पक्षहरू मार जस्तै महसुस, बस San सेबस्टियन बाहिर भोजन! इमान्दार हुनु पर्दा, तपाईं स्पेन कहीं तपस खान सक्नुहुन्छ, र तपाईंले यसलाई प्रेम छौँ. तर, उत्तम उत्कृष्ठ प्राप्त गर्न, यो समुद्र तटीय शहर मा प्रयास. के यो स्थान त विशेष बनाउँछ मुख्यतया स्वाद को दायरा छ र तपाईं देखि चयन गर्न सक्नुहुन्छ artistry. मसालेदार र खट्टा, तातो र चिसो, देहाती र परिष्कृत, एकल बारमा सबै पाउन छन्. तपाईं फेला प्रत्येक ठाउँमा केही टुक्रा प्रयास. तपाईं पूर्ण हुनेछु, तर यो लायक हुनेछु.
हो, रेल खाना पनि शानदार तर हुन सक्छ सबै भन्दा राम्रो रेल खाना कोपेनहेगन गरेको noma गर्न तुलना! नर्डिक खाना को बिकन छ, र तपाईं जान यसलाई जाँच गर्नुहोस् शक्ति सबै गर्नुपर्छ. मात्र गर्छ यो एक युरोप मा खाद्य लागि सर्वश्रेष्ठ शहर मध्ये एक छ, खाना खाने छैन, छ. 1 वर्ष को लागि San Pellegrino सूचीमा स्थान! हो, मूल्यहरु उच्च हो, तर तपाईं प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ स्वाद यो लायक छ. तपाईं रेल द्वारा स्कैनडिनेविया गर्न भन्दा पप गर्न चाहनुहुन्छ भने, कोपेनहेगन भर्खरै गरिरहेको लागि ठूलो गेटवे स्टप छ.
बन कोपेनहेगन गाडिहरु गर्न
कोपेनहेगन गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
हामी छाप Trieste साथ Foodies को लागी हाम्रा सर्वश्रेष्ठ शहरहरूको सूची, इटाली
हामी सबै स्वादिष्टता उल्लेख बिना युरोप मा खाद्य बारे सर्वश्रेष्ठ शहर लेख्न सक्नुहुन्न इटाली. राम्रो ... सबै तर कम्तिमा केही.
ट्रियस्टे अष्ट्रो-हंगेरी साम्राज्य म विश्व युद्ध सम्म गर्न belonged. यो वास्तवमा सही यहाँ ट्रियस्टे गरेको स्वादिष्ट व्यञ्जन महत्त्व होइन्छ. किन? किनभने ट्रियस्टे इतिहास यसको भोजन मा एक पर्याप्त प्रभाव बाँकी. को एटिपिकल विशिष्ट इटालियन व्यञ्जन, ट्रियस्टे पास्ता यस्तो अनौठो Combos र prides पिज्जा sauerkraut र कटा ससेज सँगसँगै, यस्तै र. भव्य खाना आनन्द, मलाईदार चकलेट, र शहर मा शानदार कफी जेम्स जइस Ulysses लेखन सुरु जहाँ. को Adriatic मार्फत एक आश्चर्यजनक दृश्य आफ्नो भोक चोट छैन, या त. इटाली र स्लोभेनिया बीच जडान रेल द्वारा सिद्ध छ, त्यसैले तपाईं स्लोभेनिया एक मौका दिन सक्छन् जबकि छिमेकी मा.
जेनोआ ट्रियस्टे गाडिहरु गर्न
इतिहास, खाना, र युरोप सधैं हातमा हात जाने, र तपाईं अब धेरै सजिलै यो सबै अन्वेषण गर्न मौका छ. प्रविष्ट एक ट्रेन सुरक्षित आफैलाई एक रेल टिकट किन्न र आज आफ्नो foodie साहसिक सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्छन् / fr गर्न / डी वा / ES र अधिक भाषा.
#traveleurope खाद्य खन्चुवा खाना रेल यात्रा